कर्मले पुर्याएको बर्मा ::netpatrika
कर्मले पुर्याएको बर्मा
आइतवार, माघ २६, २०७०
उपेन्द्र राज उप्रेती
२०६५ सालको दशैतिहार मनाएर गृहजिल्ला दोलखाबाट काठमाण्डौं फर्केको केही समय नवित्दै मलाई एउटा खुशीको खबर प्राप्त हुन्छ । अझ भनौं बर्मा हालको म्यान्मार स्थित नेपाली दूतावासमा बसेर केही समय काम गर्ने सुनोलो अवसर पाएको खबरले मलाई साह्रै हर्षित तुल्याउछ । यस अवसरलाई नगुमाउने निश्चित गरी मैले आफ्नो अध्यनलाई केही समय थांती राख्दै म बर्मा जाने निर्णय गर्दछु । निर्णयको साथ साथै मेरो पहिलो काम राहदानी बनाउनु थियो । दाईसंगको सरसल्लाह पछि म राहदानी बनाउन चरिकोट तर्फ लाग्छु साथमा पाल्पाका मित्र सुरज बराललाई लिएर । करिब दिउसोको १२ बजे हामी चरिकोट बजारमा उर्तन्छौं र लाग्छौ आदरणीय दाई रामकृण ढुंगेलको निवासतीर । मेरो आदरणीय दाई श्री संन्जित उप्रेतीले रामकृण दाईलाई टेलिफोनमा सबै कुरा जानकारी गराईसक्नु भएको रहेछ त्यसैले ४ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटा र अन्य कागजात उहाँलाई दिएर म मेरो साथिलाई लिएर भिमेश्वर मन्दिरको दर्शन गर्न गँए । मन्दिरको दर्शन पश्चात उहाँकै रुममा आएर खान खाई फेरी लागेउ उहाँकै अफिसतीर । अफिस पुग्ने विक्तकै दाईले सबै काम सकाएर बस्नु भएको रहेछ थोरै बेरको केही काम पछि दाई रामकृणसंग बर्माबाट फर्किए पछि भेट्ने बाचा गर्दै उहि दिन दिउँसो २ बजेको बसमा हामी काठमाण्डौं फर्केउ ।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात कात्तिक १८ गते म बर्माको भिसाको लागि चाहिने आवश्यक कागजात लिन परराष्ट्र मन्त्रालय हालको शितल निवास तिर लागे । बर्माबाट महामहिम राजदूतले मौखिक तथा लिखित जानकारी गराई सक्नु भएको रहेछ त्यसैले काम सोचेभन्दा धेरै छिट्टो भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रथम सचिव श्री दिलिप कुमार पौडेल सरले मन्त्रालयको र दूतावासले पठाएको पत्र थमाउदै भैसैंपाटी स्थित बर्माको दूतावासमा भिसाको लागि आवेदन गर्न जाने सुझाव दिनु भयो । फलस्वरुप म आवश्यक कागजात बोकेर दूतावासतर्फ लागे । दूतावासमा पुगेर आफ्ना सबै कुरा राखेपछि एक स्थानीय कर्मचारीले कुटनैतिक कर्मचारीसँग भेट गर्ने समय मिलाई दिए । केही समय पछि दूतावासका सचिवसँग मेरो भेट भयो । उहाँसग भएको छोटो कुराकानी र म सँग भएका कागजातहरु देखाई सकेपछि आँधा घण्टामा भिसा उपलब्ध गराउने बाचा गर्दै उनी आफ्ना काममा ब्यस्थ भए भने म आफ्नै संसारमा हराई रहेको थिँए । करिब ४० ४५ मिनेटको अन्तराल पछि न्चबतष्क ख्ष्कब (विना शुल्क विशेष व्यक्तिहरुलाई मात्र उपलब्ध गराईने भिसा) सिहतको मेरो राहदानी मलाई सुम्पीएर स्थानीय कर्मचारीले शुभयात्रा भन्दै औपचारीक विदा गरे । म पनि हर्षित हुदै आफ्नो बासस्थान लैनचौर तर्फ लागे । कोठामा पुगेको केही समय नबित्दै कोशी टाभल्स एण्ड टूरका संचालक मेरा आदरणीय अंकल विनय बस्नेतले प्लेनको टिकट तयार भएको जानकारी गराउनु भयो र म पसिना नओभाउदै लाजिम्पाट स्थित कोशी टाभल्सतिर लागे प्लेन टिकट लिनकको लागि । आवश्यक कागजातको बन्दोबस्त पश्चात २०६५ साल कात्तिक २१ गते विहानको ११ बजे बर्मा प्रस्थानको ला म त्रिभुवन अन्तराष्ट्रि विमानस्थल पुगे । २ :०५ को उडान तय भएपनि वायुसेवा निगमकोनियम अनुरुप म २ घण्टा अगाडीनै विमानस्थल पुगीसकेको थिँए । मलाई विदा गर्नका निम्ती मेरा आदरणी दाई सन्जित , मित्रहरु सुरज बराल, महेन्द्र गहतराज, बाबुराम आचार्य, रविन जिरेल लगाउत थुप्रै आफन्त तथा सुभचिन्तकहरुको बाक्लो उपस्थिती रहेको थियो । उहाँहरु सबैलाई सिसाबाट विदाईका हात हल्लाउदै म उडानको प्रतिक्षामा धबष्तष्लन कक्षतिर लागे । मनमा आधा डर र आधा रहर बोकेर म उडानको प्रतिक्षामा बसिरहेको थिएँ यक्तिकैमा विमानस्थलका कर्मचाररिले उडानको समय भएको जानकारी गराए र म पनि आँफुसँग भएको लगेजलाई घिसार्दै विमानतर्फ अघि बढे । मनमा डर र रहर दुवै बराबर सलबलाई रहेका थिए । दूतावासमा बसेर काम गर्न पाँउदा छुट्टै आन्नद र रहर पलाएका थिए भने पहिलो चोटीको विदेश भ्रमण यात्रा कस्तो रहने हो ? कहाँ जाने ? केही थाहा नभएका कारण मनमा उत्तिकै डर पनि पलाएको थियो ।
काठमाण्डौंबाट बर्मामा सिधै उडान नहुदा १ रात थाइल्याडको बैंककमा बस्नु पर्दा त्यहाँ कस्ता समस्याहरु आईपर्छन् भन्ने डरले मन उत्तिकै आँत्तिएको थियो । करिब पाँच घण्टाको उडानपछि म थाइल्याण्डको सुवर्णभूमी विमानस्थलमा पुग्दछु । साथमा कोही चिनेको मान्छे छैन कहाँ जाने, के गर्ने मलाई अलमल भईरहेको थियो त्यसैले म पनि अन्य यात्रुहरुको पछि लागे त्यो विशाल विमानस्थलमा । अन्य यात्रुहरु जता जता जान्छन् जसो जसो गर्छन् मैले पनि त्यसै गरे र अध्यागमन विभागको काम सकाएर रात विताउन बस्ने ठाँउको खोजीमा लागेँ । बाहिर जाने अनुमती अर्थात थाइल्याण्डको भिसा नेपालबाटनै लिईसकेको भएतापनि समयको अभावले बाहिर नजाने र एरर्पोटमा नै बस्ने निश्चित गरी धबष्तष्लन चययm को खोजीमा लागे । सायद विश्वकै आधुनिक, सुविधा सम्पन्न र विशाल विमानस्थलमध्ये थाईल्याण्डको सुवर्णभूमी अन्र्तराट्रिय विमान स्थलपनि एक हो । जहाँ हरेक ५-५ मिनटमा विश्वका विभिन्न मुलुकका लागि उडान भर्ने र अवतरण गराउने कार्य भईरहन्छ । त्यसैले होला जताततै मान्छेहरुको भिड थियो । पसल, रेष्टुराँ, धबष्तष्लन कक्ष सबैतिर मान्छेहरुको खचाखच थियो भने उत्तीकै व्यवस्थि, सुन्दर र आकर्षक रमझम देख्न पाइन्थ्यो तरपनि मलाई भने जताततै सुनसान र एक्लो महसुस भईरहेको थियो । नेपाली मुलको अझ भनौ नेपाली भाषी कुनै एक जना व्यक्ति भेट्न पाए उसैको पछि लाग्ने थिए जस्तो भान पैदा भएको थियो तर कोही त्यस्तो मान्छे भने पाउन सकिरहेको थिईन । रात छिपिदै थियो म भने कोही नेपाली भेटिन्छकी भन्दै यता उता गरिरहेको थिएँ । रातको करिब २ बजीसकेको थियो । म भने पुरै रात ननिदाउने निश्चित गरी विभिन्न पसल तथा धबष्तष्लन कक्षमा सजाईएका विभिन्न प्रजातिका फुलहरुको अवलोकन गर्दै थिएँ यक्तिकैमा अलि परबाट भाई तपाई नेपालबाट भन्ने आवाजले मलाई साह्रै आनन्दीत तुल्यायो । उसको प्रश्न भुँइमा खस्न नपाउदै हजुर तपाई पनि नेपाली हो ? भनेर मैले सोधे । बल्ल मन ढुक्क भयो । यसरी प्रवासमा नेपाली भेट्दा जसरी माउ हराएको बाछो आफ्नो आमालाई भेट्दा जति खुशी हुन्छ मलाई त्यस्तै आनन्द मिलेको थियो । उहाँ पनि जापन जादै हुनुहुँदो रहेछ । घर गुल्मी नाम अर्जुन सुवेदी रहेछ । केही समयको भलाकुसारी पछि उहाँले केही खाने प्रस्ताव गर्नुभयो । मैलेपनि उहाँको प्रस्तावलाई नकार्न सकिन र हुन्छ भनिदिएँ । समय त मध्ये रात भएको थियो तर यात्रुहरुको भिड, व्यबस्थित र आर्कषक थाई एरर्पोटमा कुनै रात नभएर दिउँसोकै भान भईरहेको थियो । हामी एरर्पाेटभित्रकै पस्छौ । उहाँले मलाई के खाने भनेर प्रश्न गर्नुभयो । मैले दाईको रोजाई नै मेरो रोजाई भनेर उहाँलाईनै जिम्मा दिदै पन्छिए । विभिन्न प्रकारका खानाको अवलोकन पछि उहाँले खिर मगाउनु भयो । थाईल्याण्डको प्राय सबै खानामा चिनीको प्रयोग गरिदो रहेछ । यती सम्मकी उनीहरुले मासुको परिकार पकाउदा पनि चिनीको प्रयोग गर्दा रहेछन् । त्यसैले उहाँले २ प्लेट एयचचष्मनभ (अनती धानको खिर) अडर गर्नुभयो । केही समयको पर्खाइ पछि धबष्तभच ले २ ठाँउमा ल्याएर हाम्रो अगाडी राखिदिए । पकाउने विधि फरक भएर होला नेपालमा खाईने खिर भन्दा अलि फरक स्वादको थियो उक्त खिर । खिर जति स्वादिलो थियो त्यतिनै म अचम्ममा परेको थिएँ किनकी एक प्लेट खिरको २८ अमेरीकी डलर परेको थियो । (जुनबेला १ अमेरीकी डलर बराबर ६३ नेपाली रुपैया हुन्थ्यो) यो अर्थमा एक प्लेट खिरको करिब १८०० रुपैया परेको थियो । म आश्र्चय मान्दै सोधेको थिए कत्ति महंगो रहेछ है दाई उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो भाई नेपालीमा रुपान्तरण गर्दा महंगोजस्तो लागेको होला तर अन्य देशहरुको तुलनामा यो खासै महंगो हैन त्यसमा पनि यो एरर्पोट भित्रको रेष्टुरेन्ट हो । विहानको ८ बजे बैककबाट यांगुनकोे उडान भएको कारणले उहाँले २ ३ घण्टा भएपनि सुत्नुपर्छ भनेपछि धबष्तष्लन कक्षमा रहेका आ आफ्नो सिट खोलेर लगेज सिटमुनी राख्दै निदाउने कोसिस गर्यौ । अघिल्लो दिनको थकाई र निन्द्रा बाँकी भएर होला म सुतेको केही बेरमानै निदाएछु । भोलीपल्ट विहान ६ बजे उहाँलेनै व्यउझाई दिनुभयो । विहानीको नित्यकर्म सकाएर फेरी द्ययबचमष्लन एबकक लिन लाईन बस्नुपर्छ भन्नु भयो मैले उहाँकै आज्ञाअनुरुप द्ययबचमष्लन एबकक लिएँ । उहाँको उडान मेरो भन्दा २ घण्टा पछि भएको कारण मलाई यांगुनको धबष्तष्लन कक्षसम्म पुराएर यही पर्खनु भन्नु भयो । उहाँलाई यांगुन कक्ष भित्र प्रवेश गर्ने पास नभएकोले बाहिरबाटै हात हल्लाएर छुटिएको संकेत गर्नुभयो । त्यो पल अहिले पनि सम्झन्छु अनि अहिले पनि त्यो सहयोगी मुहार मेरो आँखामा झलझली आईरहन्छ तर दुर्भाग्य मैले उहाँको फोन नम्बर र ईमेल आइ डी लेखेर दिएको त्यो सानो कागजको टुक्रा हराउदा अहिलेसम्म पनि सम्पर्क हुन सकेको छैन । तैपनी मेरो श्रदासम्मान यहि अक्षररुपी शव्दबाट मेरा लागि त्यो पल भगवानझै उदाएका उही अर्जुन सुवेदीलाई ………..
करिब १ घण्टाको उडान पछि म यांगुन अन्र्तराट्रिय विमानस्थलमा पुग्दछु । मलाई लिन दिदी भिनाजु र भान्जा अनमोल राज थपलिया पहिलेनै एयरर्पोटमा आइसक्नु भएको रहेछ । दूतावासबाट जारी परिचयपत्र भएकोले उहाँहरुलाई अध्यागमन विभागको सबै ठाउँमा जाने अनुमती रहेछ । त्यसैले उहाँहरु मलाई अध्यागमन विभागको भित्रनै कुरीरहनु भएको रहेछ । यसो हुदाँ मलाई बाहिर आएर उहाँहरुलाई खोजीरहनु पर्ने झन्झट पनि रहेन । त्यसैले चेकजाँचको काम सकाएर सिधै लायौ दूतावासको कार पार्किगतिर । नेपालका केही जिल्लाको भ्रमण गरेतापनि म नेपाल बाहिर कहित्यै गएको थिईन । अझ भनौ बर्मा मेरो पहिलो विदेश थियो । अग्ला अग्ला नरिवल र आँपका रुख, जताततै हरियाली, समथर भूबनावट, गर्मी हावापानी र व्यबस्थित तथा फराकिला सडक यी यावत कुराहरुले मलाई अच्मित बनाई रहेको थियो । कार दौडीरहेको थियो म भने सोच्दै थिए आखिर कहिले होला नेपाल पनि यस्तो ? हुन त बर्मा विकसित देशहरुको सूचीमा त पर्दैन तैपनी देश विकासमा आबश्यक सबै कुराहरु यहाँ उपलब्ध छन् । खनिज पदार्थ, ग्याँस, हाईड्रोपावर, दुर्लभ तथा महँगा पथ्थर तथा सुनका खानी प्रसस्तै छन भने कृषिमा पनि बर्मा अब्बल छ । समथर भूभाग, गर्मी हावापानी तथा सिंचाईको राम्रो व्यवस्था भएकोले यहाँ बर्षमा २ पटक धान तथा दाल खेती गरिन्छ । अहिले पनि बर्माले दाल चामल देखि लिएर हाईड्रोपावर, खनिज धातु, सामुन्द्रिक खाना लगायत विभिन्न बस्तुहरुको भारत, चीन, थाईल्याड, कुवेत, युएई, बहराई लयाएत देशहरुमा गरिएको निर्यात व्यापारबाट करोडौ डलर बराबरको मुनाफा संकलन गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । मनमा यस्तै कुरा सोच्दा सोच्दै करिब ४५ मिनेटको यात्रा पछि दूतावास परिसरमा पुगियो । करिब ४ बर्षको म्यान्मार बसाईमा मैले त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षका विभिन्न फरक तथा रोचक कुराहरुको अनुभव लिने मौका पाँएको थिएँ । क्षेत्रफलको हिसावले नेपाल भन्दा करिब ६ गुणा ठूलो भएतापनि जनसंख्याको हिसावले नेपाल भन्दा २ गुणा मात्र बढि छ । कुल जनसंख्याको लगभग ९५ प्रतिशत बर्मेलीहरु बुद्ध धर्ममा आस्था राख्दछन । बुद्ध धर्मका धर्मगुरु सिदार्थ गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी, नेपाल हो र नेपालीहरु गैतम बुद्धका सन्ततीहरु हुन भन्ने राम्रो छाप बर्मेलीहरुमा परेको हुँदा नेपालीहरुलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण अन्य देशका नागरिकहरुलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण भन्दा फरक रहेको मैले पाँए । दोस्रो विश्वयुद्धताका बर्माको सिमा सुरक्षामा खटिएका वीर गोर्खालीले देखाएको बहादुरी र बुद्धिटहरुको तीर्थस्थल लुम्बिनी भएकै कारण तेहाँ रहेका करिब ३ लाख नेपाली भाषीहरुलाई म्यान्मार सरकारले सजिलै म्यान्मारको नागरिकता प्रदान गरिरहेको छ । सन १९९१ सालको नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता तथा बर्माकी प्रजातन्त्रवादी विश्वविख्यात नेतृ म्बध ब्गलन क्बल कगग पष् ले त नेपालीहरुको खुलेरै प्रसंसा गर्नुभएको छ । करिब १९ वर्षे जेल जीवन बिताएर केही बर्ष अघिमात्र जेलमुक्त हुनुभएकी नेतृ सुकीले त आफु जेलभित्रै रहेको बेला Let’s Visit to Nepal पुस्तकनै लेख्नुभएको छ । यसरी हरेक तह र तप्काबाट नेपालीहरुको प्रसंसा गरिरहदा त्यहाँ रहेका नेपाली भाषीहरुले राज्यबाट पाउने सेवा र सुविधाको उचित प्रयोग गरेको मैले पाँए । शैनिक शासन भएतापनि राजनैतिक प्रतिबन्ध बाहेक अन्य हरेक कुरामा छुट छ । राजनैतिक दल दर्ता गर्न नपाउने नियम भएता पनि त्यहाँ रहेका सचेत तथा बुद्धिजिवी नेपालीहरुले धर्मको आवारणमा नेपालीहरुको एक छाता संगठन दर्ता गरेका छन् । अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दू धार्मिक संघका नाममा दर्ता भएको यस संगठनले बर्माको विभिन्न प्रान्तमा छरिएर रहेका नेपाली जातीलाई एकजुट गराई आफ्नो भाषा, साहित्य, कला, संस्कृती, धर्म र पहिचानलाई जोगाई राख्न अभिप्रेरीत गर्दै आईरहेको छ । फलस्वरुप बर्मामा रहेका नेपाली जातीले आफ्नो आफ्नो घर घरमा एउटा पूजा कोठाको निमार्ण गरी विभिन्न हिन्दू देवी देवताहरुको मूर्ती सजाउने, आँगनको छेउमा तुलसीको मठ बनाई तुलसी रोप्ने परम्परा अझै पनि विद्ययमान छ । यसको अलवा अहिले पनि बर्मामा रहेका नेपालीहरुले आफ्नो परम्परा जोगाई राख्न हिन्दू परम्परा अनुसार तीज, जनैपुर्णिमा, दशै तथा तीहार धुमधामका साथ मनाउदै आईरहेका छन् । जुन भेषमा अनि जुन भूगोलमा बसेपनि हामी नैपाली नै हौ र हाम्रो तन मन र रगतमा नेपालीपन छ भनिरहेका छन् । पितृथलोको एक चिम्टी माटोलाई शिरमा राख्दै नेपाली माटोमा पाहिला टेक्नु बमेर्ली नेपालीहरुको अन्तिम इच्छा रहेको मैले महशुस गरे । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण केही महिना अघि ल्च्ल् को केन्द्रिय अधिवेशनमा सहभागी हुन बर्माबाट आएका बर्माका चर्चित युवा साहित्यकार तथा मेरा आदरणिय दाई श्री लक्ष्मण न्यौपानेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चार हात खुट्टा टेकेर नेपाली माटोमा शीर राखेको तस्बिर नै काफी छ । करिब दुई महिने नेपाल बसाईको क्रममा उहाँले नेपालका विशिष्ट हस्ति तथा चर्चित व्यीक्तहरु जस्तै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादब, परराष्ट्र मन्त्रि माधव घिमिरे, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ हांस्यकलाकार हरिवंश आचार्य, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, साहित्यकार नेत्र एटम अषेश मल्ल, वरिष्ठ गीतकार क्षेत्रपताप अधिकारी, सत्यमोहन जोशी लगायत थुप्रै विशिष्ट व्यक्तिहरुसंग भेट गर्नुभएको थियो । यसरी बर्मामा रहेका नेपालीहरुमा नेपालीपन र नेपालको माया देखेर नेपालबाट बर्मा पुग्नुभएका विभिन्न पार्टीका शिर्श नेता, कुटनैतिक पदाधिकारी, ग्ल् का प्रतिनिधी, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार जो कसैले पनि एक पटक भन्ने गरेका छन् आखिर कर्मले नै ल्याएको रहेछ बर्मामा । यसरी आफ्नो चार बर्षे सफल कार्यकाल पश्चात २०६९ साल चैत्र ४ गते नेपाल फर्कनुभएकी महामहिम राजदूत श्रीमती गुणलक्ष्मी शर्मासंगै म पनि नेपाल फर्किएँ । भौतीक शरीर छोड्न नमिले पनि मन र मूटु बर्मामा नै छाडेर फर्केको छु ।
झापा-१ मा यसरी जित्दैछन् राम कार्कीले चुनाब
कांकरभित्ता। भुमिगत कालमा राम कार्की ,पार्थ क्षेत्री जस्ता उपनामले चर्चित माओवादी केन्द्रका नेता एवं पुर्व संचारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीलाई यतिबेला झापाको क्षेत्र नं.१ मा भ्याईनभ्याई छ । नेपालको वाम आन्दोलनमा प्रखर मार्क्सवादी चिन्तक र अध्यताको रुपमा परिचित कार्की वाम किल्लाको रुपमा चर्चा गरिने क्षेत्रका साझा वाम उम्मेदवार वनेकाले निकै उत्साहित छन्। कार्की भन्छन् -‘ एमाले माओवादी गठवन्धनमा हिजोको सिङ्गो मेची अञ्चलभरि संघ तर्फ म एकमात्र माओवादी...
सञ्जयलाई शहीद बनाउँदै भोटका लागि शहीद खोज्दै महतो
सत्यजीत झा ‘ज्योति’ राजेन्द्र महतो खास जातीय भोट संकलन गर्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका महान् शहीद दुर्गानन्द झाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गर्ने भएका छन् । यसअघि कहिल्यै स्मरण नभएका शहीद झालाई ठयाक्कै चुनावका बेला उनले सम्झनु चुनावी राजनीतिबाहेक अरू केही होइन । महतो अध्यक्ष रहेका सद्भावना पार्टीको ज्यान बलियो बनाउने गरी संविधानसभा २ मा एकमात्र प्रत्यक्षतर्फ सभासद् निर्वाचित सञ्जय साहलाई राजेन्द्र महतोले राजनीतिक...
यो कस्तो संयोग हो आफ्नै पार्टी र सहयोद्धा सत्तामा हुदा बालकृष्ण जेल पुग्नु पर्ने ?
यो कस्तो संयोग हो आफ्नै पार्टी र सहयोद्धा सत्तामा हुदा बालकृष्ण जेल पुग्नु पर्ने ? प्रश्न, शंका र आक्रोश समानान्तर कुदिरहेका छन । जब बालकृष्ण ढुङ्गेल गिरफ्तार परि जेल चलानको खबर आयो लाखौं दिमागहरुमा एकाएक आक्रोसको ज्वाला दन्कियो। एकातिर संसदिय राजनीतिले चुनावी टिकटको बिस्कुन सुकाइरहेको छ ।अर्कोतिर ब्यवस्था वदल्ने आन्दोलनका एक होनहार योद्धा घेरामा परि चिसो जेलमा मिल्काइन्छ । सम्झना छ की छैन गणतन्त्रको शर्मागर्मी यात्रा...